दंगल मनोविज्ञानको मार
रिडर्स झापाद्वारा काँकडभिट्टामा आयोजित कला साहित्य उत्सवका अन्तरक्रियाहरूमा खुला बहसको राम्रो अभ्यास भयो । चैतन्य मिश्र सरको ‘की नोट स्पिच’ बाट प्रारम्भ भएको उत्सवका केही छलफल निकै विचारोत्तेजक थिए । भुपाल राई, हेमन यात्री र चन्द्रवीर तुम्बापोले साहित्यमा जनजातीय चेतनाबारे छलफल गरे ।
के ट्वीटर डुब्दै छ ?
केही महिनायता ट्वीटर चर्चाको केन्द्रमा रहयो । यसरी चर्चामा रहनु हरेक कम्पनीको सपना हुन्छ । राजनीतिज्ञ, कर्पोरेटका हाकिमहरू, अधिकारवादी र आम मानिससम्म सबै जना अमेरिकी राष्ट्रपतिको नयाँ ट्वीट पढ्न यस प्ल्याटफर्ममा झुम्मिरहन्छन् ।
सबैका लागि एउटै कुरा मनोरञ्जन हुन सक्छ ? वा फरक किसिमका मानिसका लागि मनोरञ्जनका खुराक पनि फरक हुन्छन् ? ‘भद्रगोल’ र ‘तीतो सत्य’ जस्ता सिरियल वा ‘छक्का पञ्जा’ जस्ता फिल्मका जोक, टुक्का नै सबैका लागि मनोरञ्जन हुन्छन् ? वा मानिसको विचार, भावना र संवेदनालाई छुने, हल्लाउने कुराले कसैलाई मनोरञ्जन दिन्छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर एकै वाक्यमा दिन सकिंदैन ।
‘केन्या पथ’ को भय
भारतीय भूमिमा १९९६ मा भएको विश्वकप क्रिकेटको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो थिएन । भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाले संयुक्त रूपमा क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो इभेन्ट गरेका थिए । बंगलादेश अझै यो स्तरमा आइसकेको थिएन । धेरैले मान्छन्– स्याटेलाइटको माध्यमबाट उक्त विश्वकपले नेपाली क्रिकेटमा ठूलै तरङ्ग ल्यायो ।
फागुन २७ र २९ गतेको पर्खाइमा छन्, नेपाली क्रिकेट खेलाडी र प्रशंसक । त्यसको कारण हो, विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपाल र केन्याको प्रतिस्पर्धा । त्यो पनि घरेलु मैदानमा । च्याम्पियनसिपमा आठ देश छन्, यसबाट शीर्ष चार टिम विश्वकप छनोटमा पुग्नेछन् । त्यससमा पुग्न नेपाललाई केन्यासँगको नतिजा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मानवशास्त्रीय दृष्टिमा रंगमञ्च
शिल्पी थिएटरको गोठाले नाटकघरमा माघ ६ गतेदेखि २९ गतेसम्म डा. शिव रिजाल लिखित र घिमिरे युवराजद्वारा निर्देशित नाटक ‘दीक्षान्त’ मञ्चन भयो । शिल्पी थिएटरका अध्यक्ष कुमार आलेका अनुसार ३ हजार ५ सय जति दर्शकले यो नाटक हेरे ।
‘लद्दू छ जीवन’
अस्ति भर्खरै ३ फरवरीमा लेखक इन्द्रबहादुर (आईबी) राईको ९० औं बर्थडे उत्सव थियो । तर, उनलाई त्यसको उति हेक्का रहेनछ । बरु उनी पछिल्ला दिनहरूमा गत वर्ष अगस्ट २७ मा आफूलाई एक्ल्याएर गएकी श्रीमती मायादेवीका बारेमा धेरै सोचमग्न हुँदै दिन कटाउने गर्दा रहेछन् । बर्थडेको साइतमा सिलिगुढी, सालबारीवासी छिमेकी कवि ज्ञानेन्द्र खतिवडा, भविलाल लामिछानेसहितको टोली फूलमाला र मिठाई लिएर आईबी सरछेउ पुगेपछि मात्रै उमेरको हिसाब सुरु भएको रहेछ ।
हाम्रो छिमेकी देश चीनभन्दा धेरै टाढाका देशमा साइकल लोकप्रिय भएको कमैलाई थाहा छ । सन् २००० देखि २०१० सम्म अध्ययनको क्रममा जर्मनीमा बस्दा मैले त्यहाँका विभिन्न सहरहरू हेम्बर्ग, बर्लिन र मुनिख घुमेको थिए । जर्मनीका सहरहरूमा सइक्लिङ गर्नेहरू निकै छन् । तर जर्मनीभन्दा डेनमार्कमा व्यवस्थित छ यो ।
त्यस्तो ठाउँ सायदै होला जहाँ पुग्ने सबैले तारिफ गरून् । तर मुगुस्थित रारा ताल यस्तो छ, जो कोही यसको प्रशंसा नगरिरहनै सक्दैन । अझ यहाँ जलहाँसको विचरण हेर्न पाएका र वरिपरि जंगलमा कालिज, डाँफे, कस्तुरी र रतुवा देख्न पाएकाहरूको त कुरै बेग्लै ∕ नेपालकै ठूलो यस ताल १०.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
फागुन पहिलो साताका पाँच दिन नवलपरासीको रजहरस्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा बिताउने अवसर जुटयो । चिकित्सालयबारे सामान्य जानकारी चितवन र नवलपरासीका केही मित्रहरूबाट पहिले नै पाएको थिएं । अर्को एक जना साथीको पनि त्यहाँ जाने इच्छा थियो । यु ट्युबबाट सम्पर्क सूत्र र थप जानकारी मिल्यो ।
पारि देखिन्छ– गाउँ
सत्ता र तिमी
भर्खर सुत्केरी भएर आफैं असाध्य भोकाएकी
सम्बन्धविच्छेद : रहर हैन बाध्यता
अघिल्लो साता ‘कोसेली’ मा प्रकाशित पूर्ण पी राईको ‘पैसा र पारपाचुके’ शीर्षकको आलेखको लेखकीय दृष्टिकोणप्रति मेरा केही विमति छन् । उक्त आलेख एकपक्षीय भएकाले त्यसको सन्तुलनका लागि यो लेख तयार गरेको हुँ ।